Warbixintii ugu danbeysay itoobiya Covid19 iyo 3 qof oo jooga Jigjiga – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Warbixintii ugu danbeysay itoobiya Covid19 iyo 3 qof oo jooga Jigjiga
Wasaarada caafimaadka itoobiya ayaa shaacisey warbxintii ugu danbeysay ee 24kii saacadood ee ugu danbeyey COVID19 Ethiopia ugu dambeeyay,
Afar iyo toban (14) qof ayaa laga helay cudurka ‘COVID19’ 3271 tijaabooyin shaybaar oo la sameeyay 24-kii saac ee la soo dhaafay, taasoo tirada guud ee Itoobiya lagu xaqiijiyay inay tahay 365.
Afar (4) qof ayaa sidoo kale soo kabsaday, taas oo wadarta guud ee dib loo soo celiyay laga dhigay 120.
14 ka mid ah ee tijaabiyay cudurka maanta lix (6) waxay leeyihiin taariikh safar, 7 (7) waxay leeyihiin xiriiryo ay la leeyihiin kiis hore iyo mid (1) midkoodna ma leh labadaba. Sagaal (9) ka mid ah waxay ka socdaan #AddisAbeba (Toddobo ka mid ah waxaa sabab u ah xiriir la leh kiis hore, mid waa darawallada xamuulka qaada ee dalka gudihiisa, kan kalena waa kan aan safrin ama xiriir la lahayn).
Mid wuxuu ka socda #Tigray, #Mekelle xarunta karantiilka, midna wuxuu ka socda #Oromia. Bukaannada labada xaaladoodba waa darawallada xamuulka qaada ee dalka ukala gudbaya.
Saddexda ugu dambeysa waxay ka socdaan #Jigjiga xarunta karantiil ee gobolka #Somali.
Isbedellada ka socda Wasaaradda Caafimaadka: Hal kiis oo shalay lagaga dhawaaqay xarunta #Ataye karantiil ee gobolka #Amhara, ayaa ah kiis duug ah oo horey loo tiriyey. Sidaa daraadeed shalay dood ahaan waa 34, halkii ay ka ahayd 35.